Filed under: တက်ခ်ပိုစ် — 8 Comments
>မှန်ပအကိုရေ နိစ္စဒူဝ မှာ ကောင်းတာသာ မလာရင်ရှိရင်ရှိမယ် ကံများမကောင်းတဲ. နေ.တော. အစုလိုက်အပြုံလိုက် ၀င်တော.တာဘဲဗျာ … နိစ္စဒူဝတိုင်းအေးချမ်း ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ ….
>ကံများမကောင်းရင် ရေသောက်တာတောင် နင်တယ်တဲ့ အကိုရေ နိစ္စဓူဝ ကြုံနေရသမျှကတော့ သုခက နည်းပီး ဒုက္ခများပေမဲ့လဲ လူ့အဖြစ်က ဓားသွားပေါ်က ပျားရည်စက်လေးတွေကို အရသာခံရသလိုပါပဲသူ့နည်းသူ့ဟန်တော့ ပျော်သလိုနေရတာပဲ 😦
>မင်္ဂလာပါ။ လာလည်ဖတ်ရှုသွားပါတယ်။ အတွေးစာတွေ ကို တွေ့ရတယ်။ ဒီအချိန်တရား အလုပ်လုပ်ရင်တော့ တရားရနိုင်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ။
>ကိုချမ်းရေနိစ္စဓူဝလေးကို ရေးပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါနော်…ကံမကောင်းခြင်း ဒုက္ခတွေကတော့ အဖော်နဲ့ အပေါင်းနဲ့ပဲလာကြစမြဲလေ….ကံကောင်းခြင်းနေ့ရက်လေးတွေလဲ ရှိတတ်ပါသေးတယ် အကိုရေ..ပျော်ရွှင်စရာ ကြည်နူးစရာ နိစ္စဓူဝလေးတွေ ကြုံပါစေနော်…နှင်း
>၀ိုင်းလည်း နိစ္စဓူဝ ရုံးကိုပြေးနေရတာပဲလေ ပျော်ရာမှာမနေရ တော်ရာမှာပဲနေရတာကိုး…..တခါတလေ ငြီးငွေ့မိတယ် ကိုချမ်းရေ..နိစ္စဓူဝ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော်
>မှန်တယ် ဘကြီးရေ…ပျော်ရွှင်မှုတွေပြည့်တဲ့ နိစ္စဒူဝလေးဖြစ်ပါစေ။